Best Cheap Earphones - အကောင်းဆုံး အတန်းဆုံး နားကြပ် Brands များ
Lifestyle, Lifestyle, Others, Technology
Best Cheap Earphones – အကောင်းဆုံး အတန်ဆုံး နားကြပ်0588
The KaungHtet February 15, 2022 5:54 am March 2, 2022
၂၁ ရာစုရဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ရေးအတွက် လူတိုင်းဖုန်းတစ်လုံးကိုယ်စီရှိကြသလို ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုဖို့ နားကြပ်တစ်ခုလည်း မဖြစ်မနေဆောင်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။
မိမိကြည့်ရှုနားဆင်လိုတဲ့အရာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဆူညံနှောင့်ယှက်မှုကင်းစွာ အေးအေးဆေးဆေးဆောင်ရွက်ပေးရုံသာမက သုံးစွဲသူရဲ့ စိတ်အာရုံပိုမိုစုစည်းနိုင်၍ အလုပ်တာဝန်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ပါ နားကြပ်တွေက တာဝန်ယူထားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ လူတိုင်းလက်လှမ်းမီပြီး Shop App တွင်သာရရှိနိုင်မယ့် ‌စျေးနှုန်း ၂ သောင်းအောက် Earphones Brand များနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
[ REMAX ]
REMAX – TWS-10i True Wireless Earbuds
Remax ရဲ့ နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ Earbuds တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TWS-10i True Wireless Earbuds လေးကပေါ့ပါးပြီး HiFi Sound စနစ်ပါဝင်တာကြောင့် အသံထွက်အားကို ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားစေပါတယ်။ 200 mAh ရှိပြီး (၁) နာရီစာအားသွင်းထားပြီး (၄) နာရီတိုင်တိုင် မနားတမ်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Bluetooth Version 5.1 ဖြစ်လို့ အကွာအဝေး ၁၀ မီတာအထိ လိုင်းဆွဲအားမိပါတယ်။ ဖုန်းပြော၊ Bluetooth ချိတ်ဆက်တာတို့ကို Touch စနစ်နဲ့ အသုံးပြုလို့ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးပြီး ဒီဇိုင်းလေးလည်းတင့်တယ်တဲ့ ဒီ Earbuds လေးရဲ့ တန်ဖိုးကလည်း ကျပ် ၂ သောင်းကျော်ဝန်းကျင်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်လို့ ကွက်တိပဲပေါ့။
[ HOCO. ]
hoco. – E54 Mia Mini Invisible Wireless Business Headset
Hoco. brand ရဲ့ Mic ပါတွင်တဲ့ E54 Mia Mini Invisible Wireless Business Headset လေးကလည်း လူကြိုက်များတဲ့ နားကြပ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဆိုဒ် 24x16x23 mm ဝန်းကျင်သာရှိပြီး ၃ ဂရမ်ပဲ အလေးချိန်ရှိတာကြောင့် ပေါ့ပါးပြီး နားထောင်ရသက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီအားကလည်း 40mAh နဲ့ (၁) နာရီခန့်အားသွင်းရုံဖြင့် (၄) နာရီအထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Bluetooth Version 5.0 နဲ့ chip Lanxun 5335B ဖြစ်လို့ ၁၀ မီတာအထိ ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလို့ အလုပ်အတွက်သာမက နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းက ၁ သောင်းကျော်ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိပါတယ်။
[ MAXELL ]
Maxell – EB Action Wired Sport Neckband
Maxell ရဲ့ Wired Sport Neckband Earphone EB-Action ကတော့ အားကစားသမားများအကြိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းချိတ်လို့ရတဲ့ Neckband ဖြစ်လို့ Gym ဆော့ရင် ပြုတ်ထွက်မသွားပဲ မြဲမြံမှုကိုပေးနိုင်တဲ့ နားကြပ်အမျိုးအစားပါ။ ရေစို၊ ချွေးစို၊ မိုးရေစိုခံတာကြောင့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Cable Length က ၃ မီတာနဲ့အထက်ဆိုတော့ တကယ့်ကိုအမိုက်စားပါပဲ။ Silicon caps ပါတာမို့ အသုံးပြုရ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး ကြာကြာအသုံးပြုရန်အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းကတော့ ၁ သောင်းကျော်သာရှိပါတယ်နော်။
Lenovo – XE05 Wireless Neckband Earphone
လမ်းလျှောက်ရင်း သီးချင်းနားထောင်လိုသူများအတွက် Lenovo ရဲ့ XE05 Wireless Neckband Earphone ကတော့အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ Bluetooth Version 5.0 ဖြစ်ပြီး Battery Capacity ကတော့ 105mAh အထိပါဝင်တာကြောင့် (၅) နာရီကြာအသုံးခံပါတယ်။ အကြာအဝေးအနေဖြင့် ၁၀ မီတာအထိချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး Metallic သံလိုက်ကို Silicon အုပ်ထားတာဖြစ်လို့ အသုံးပြုရ သက်သောင့်သက်သာရှိစေပါတယ်။ စျေးနှုန်းကတော့ ၂ သောင်းဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်။
[ KONFULON ]
Konfulon – iN15 Wired Earphone
Bus ကားပေါ်မှာ နားကြပ်ကြိုးလေးနဲ့ ချိတ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး သီချင်းနားဆင်လိုသူများအတွက် အရည်အသွေးလည်းကောင်း၊ စျေးနှုန်းလည်းတန်မှတန်တဲ့ Konfulon ရဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ iN15 Wired Earphone နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Cable Length ၁.၂ မီတာရှိပြီး Rated Power ကလည်း 15 mW အထိရှိပါတယ်။ Comfortable ဖြစ်ပြီး ရေစို၊ ချွေးစိုခံတာကြောင့် အကြမ်းအသုံးပြုချင်သူများအတွက်လည်း အံကိုက်ပါပဲ။ Hidden Mic နဲ့ Control လုပ်လို့ရတဲ့ ခလုပ်လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို အမိုက်စားနားကြပ်ကို ၇ ထောင် ဆိုတဲ့ စျေးနှုန်းကတော့ တကယ်အံ့သြစရာပါ။
Verbatim – Stereo Headphone
သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး ပင်ပန်းမှုတွေကို Headphones နဲ့အတူဖြေလျှော့ချင်များအတွက် Verbatim ရဲ့ နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ Stereo Headphone ကိုတော့ မဖြစ်မနေ try ကြည့်သင့်ပါတယ်။ Frequency Range: 20-20,000 Hz, Input Impedance: 32 Ohms, Sensitivity: 97 dB +/- 3dB @ 1kHz တို့ support ပေးနိုင်တာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adjustable ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး Cable Length ၁.၂ မီတာရှည်လျားတဲ့ Verbatim ရဲ့ အလန်းစား Headphone ကို မြန်မာငွေကျပ် ၂ သောင်းကျော်ဖြင့်သာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
[ WK ]
WK – P5 Wireless Business Headset
WK brand ရဲ့ P5 Wireless Business Headset ကတော့ အလုပ်ခွင်နေတဲ့သူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ formal earphone တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ (၂) နာရီအားသွင်းရုံနဲ့ (၈) နာရီအသုံးခံပြီး တခြားနားကြများကဲ့သို့ ၁၀ မီတာအထိချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Battery Capacity ကလည်း 170mAh အထိရှိတာကြောင့် စမတ်ကြလိုတဲ့ အမျိုးသားတိုင်းနှစ်သက်တဲ့ earphone တစ်ခုပါ။ စျေးနှုန်းက ၁ သောင်းကျော်ဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်။
ယခုဖော်ပြသောစျေးနှုန်းများဖြင့် Shop App တွင်သာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
နားကြပ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ Brand တိုက်ရိုက်မှ ၁၀၀% တရားဝင်ရောင်းချသော ပစ္စည်းအစစ်များဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
BestBest CheapCheapEarbudsEarphonesHeadphonesWirelessWireless EarbudsWireless Earphones
Previous ArticleBest Valentine’s Day Gifts For Your Partner – အချစ်အတွက်လက်ဆောင်Next Article10 Power Banks, recommended by users (သုံးစွဲသူတွေထောက်ခံထားတဲ့ Power Banks များ)